Unokuthatha isigqibo malunga nokuba ungaqala njani kwishishini?
Ngoko, wanquma ukuqala ishishini lakho. Ngeli xesha, ibhinqa elijongene nelo shishini seliqhelekile. Kodwa ke, kuphi ukuqala, ukuze loo nto, njengoko bethi, "yahamba"? Luhlobo luni lwensimi lokukhetha, indlela yokufumana abantu abalungileyo, mhlawumbi wenze yonke into wena? .. Unokugqiba njani ukuba uqale ngorhwebo kwaye uya kuxutyushwa ngezantsi.
Ukuqalisa ngempumelelo nayiphi na ishishini kubalulekile ukuba ulandele umgaqo "ezintlanu ezinkulu". Le ngongoma emihlanu ekufuneka ibe khona kwi shishini lakho: ukubaluleka komxhasi, inhlangano ecacileyo, inzuzo yokukhuphisana, ukulawula imali, ukwenza inzuzo. Kuye kubekho ixesha elide lihoxiswa ngabasomashishini baseMelika, kwaye sele sele isetyenziswe iminyaka emininzi. Enyanisweni, akukho nto ibaluleke kakhulu kule nto. Into ephambili kukuba kuthathe isigqibo kwaye unamandla okwenene angaphakathi kunye neenjongo zokuqhubeka nokuphuhlisa ishishini lakho. Kwaye ngoku malunga nenye yeengongoma ngokubanzi.
Ushishino lukhona ukudala ixabiso leentlobo ezahlukeneyo. Usebenzisa izinto ezisetyenzisiweyo kunye nezibonelelo zabasebenzi kunye nokwandisa iindleko zazo nasiphi na isiqendu, ukujika kuzo zibe yimveliso okanye iinkonzo ezithunyelwa kwipropati yomthengi. Ukubeka nje, ishishini kufuneka linikeze into apho abantu bazimisele ukuyihlawula.
Ngokomzekelo, ishishini eliphumelele kakhulu laqatshelwa nguMcDonald's. Kutheni? Wayengowokuqala ehlabathini ukudala indawo apho ungadla uhlawule ngokukhawuleza kwaye ukhawuleza, ngelixa usuka ekhaya. Inkampani yakha iindawo zokutyela kulo lonke elaseMelika, ingabi nciphisa imali yokuthengisa. Abapheki baqeshe abantu ukuba bakhonze iindwendwe ngokwemiqathango eqinile: ukubukeka okukhangayo, ukukwazi ukuhambelana nomxhasi, ukunyamezela. Abathengi bavanya lolu hlobo lwenkonzo kuba babengenayo ikhefu ukuya kwidlo sasemini, elaligcinwe ixesha. Ukongeza, inkonzo kwiivenkile zeMcdonald's isoloko ihamba phambili kuyo: ayizange ibe neyantlonelo kubathengi, yayinobuhlobo kubathengi abafuna kakhulu, kwaye ngokukhethekileyo bayakwazi ukukholisa abantwana. Lo ngumgaqo-nkqubo wobunkokheli bukaMcDonald's, obangela ukuba umhlaba uphawule kwaye uphumelele kwimeko.
Naliphi na ishishini kunye nalabo abayiphathayo, kufuneka benze ixabiso kumthengi. Ukuze wenze oku, kukho iindlela ezingabonakaliyo, kuba iminqweno yabantu ayinayo imida. Ushishino, nangona kunjalo, alukwazi ukukhonza yonke iminqweno ngaphandle kokungafani (ubuncinane ngokomthetho). Fundisisa iinkonzo kunye nemveliso evezwe kwisixeko sakho. Yintoni ekhoyo kunye nezinto ezinikezwa ngobuninzi. Khumbula ukuba ukubonelelwa kweenkonzo kuhlala kunenzuzo kwaye kungabizi, kodwa oku kufuna izakhono ezithile, ukukhethwa kwabasebenzi abakhethiweyo kunye nezixhobo. Ukuba unalo lwazi (umzekelo, ungummeli wenkundla) - unokunika iinkonzo zolu hlobo. Ukuba unemfundo efanelekileyo, ngoko akuyi kuba neengxaki zokufumana ilayisenisi. Ngoko, inkcazo yobume bemisebenzi yayo yinto yokuqala ukuqala ngezoshishino. Misela? Siyaqhubeka.
Kuzo zonke iimeko kufuneka kubekho intlangano enhle! Kumele ibe neenjongo kunye nezibonelelo (abasebenzi, izinto eziphathekayo kunye neemali zezimali) ukufezekisa iinjongo zayo. Hlela imisebenzi yakho yesikhathi esizayo, ngokwecebo elenziwe ngaphambili. Ukwenza isicwangciso soshishino kubaluleke kakhulu. Ngamanye amaxesha ngexesha lokulungiselela kunye nokuhlanganiswa, umntu osomashishini unquma ukutshintsha ubuninzi bemisebenzi, ekubeni isicwangciso sibonisa "ukusinda" kweshishini elithile. Ukuba awukwazi ukwenza isicwangciso sakho ngokwakho - qhagamshelana nabaqeqeshi. Ubuncinane, uya kukwazi kwangaphambili oko ukulindela kwi shishini lakho kunye nendlela yokwakha umsebenzi oqhubekayo.
Kufuneka ujonge ukuphunyezwa kwazo zonke iiprojekthi kunye neziphumo zazo. Isebe ngalinye kufuneka lenze imisebenzi yalo ngokufanelekileyo. Ngaphambi kokuba uqalise umsebenzi, nayiphi na umsebenzi kufuneka aqonde imisebenzi eyenza iinjongo zombutho . Ulawulo lujongene nenhlangano yenkampani. Okokuqala, oku kufuna ukusebenza komsebenzi ngabanye abantu-abasebenzi. Izibonelelo ezinjengezixhobo zokuthengisa, isikhala somhlaba kunye nemali, nangona kunjalo, kufuneke nendlela yokwenza umbutho.
Inhlangano ingadalwa ngokusebenzisa isakhiwo . Umxholo oqhelekileyo wesakhiwo ungabonakaliswa kwiCharter yenkampani. Kukho, nangona kunjalo, ezinye izakhiwo zokudala umbutho. Ngokomzekelo, ngokusebenzisa isakhiwo semali apho inkampani ihlela ukuhamba kwayo kwemali. Abaphathi bezentengiso bangaqulunqwa ngamaqela ngamanqaku emveliso okanye ngamabini omabili ngokufanayo.
Impumelelo yenkampani inokufezekiswa ngeendlela ezahlukeneyo. Abanye bakhetha izakhiwo eziqinileyo, indlela ephantse yempi kunye nolawulo oluqinileyo, imisebenzi echazwe ngokucacileyo kunye namaxwebhu aseburhulumenteni. Abanye basebenzisa indlela engafanelekanga, banike abantu inkululeko enkulu yokusebenza kunye nokudala indawo engabonakaliyo.
Ubume boshishino bunokumisela ukuba isakhiwo esinzima sisimfuneko kwinkampani. Ngokomzekelo, amafemu amancinci (aphantsi kwabasebenzi abangaphantsi kwe-50) ahlala ehlelwe ngaphantsi kweefemu ezinkulu. Iinkampani zoshishino zorhwebo, njengombandela, zinomsebenzi onamandla ngakumbi kunabo ababenomsebenzi wokwakha - kwintengiso yokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa.
Kungakhathaliseki ukuba yimalinge kangakanani, isakhiwo senkampani sinembopheleleko yentlangano enhle. Kwaye ezininzi iinkampani ezihlelwe kakuhle ziwahlukana xa abaphathi bengakwazi ukwenza imisebenzi yabo njengoko kuyimfuneko. Kwaye kwaneenkampani ezinesakhiwo "esikhululekile" siya kwenza inzuzo ukuba abaphathi bayo benza umsebenzi wabo ngokufanelekileyo.
Inzuzo yokhuphiswano yithsaba yomqhubi
Ukuze uphumelele kwimarike yayo ye-niche, inkampani kufuneka yenze into engcono kunabanye abadlali bemarike. Oku kwixesha elizayo libonelela ngeendlela ezifanelekileyo zokuncintisana. Baya kuba nenxalenye eyodwa kuphela yemveliso okanye inkonzo, kodwa abathengi bayayixabisa kakhulu. Ngokomzekelo, inkampani inokuphumeza inzuzo yokukhuphisana ngokunikela uluhlu lweemveliso. Okanye aphantsi, xa kuthelekiswa namanye, amaxabiso, okanye umgangatho ongcono, okanye inkonzo enhle. Konke oku akunakwenzeka ngokukhawuleza, kodwa kufuneka uzame le nto, ngaphandle koko ishishini liza kulinda ukuhluleka.
Umphathi wenza isigqibo esekelwe kwinto yokuba inkampani izakufumana ukhuphiswano kwiimarike-oku kunokwenzeka. Kwaye kufuneka uqikelele ngokucacileyo, ukugqiba inzuzo yenkampani yakho phambi kwabanye. Ngokomzekelo, nangona kuthengiswa, akukho nkampani inokubonelela ngokwenza umgangatho ophezulu kunye namaxabiso aphantsi kakhulu ngexesha elifanayo - ubuncinane ixesha elide. Unokunikela okusemgangathweni kwinqanaba elithile lexabiso, okungekho nto ephantsi kweemarike.
Ukuba ulawulo kufuneka lithathe isigqibo sokuba ngaba inkampani izakukhuphisana nabanye ngexabiso okanye umgangatho. Emva koko inkampani kufuneka ilawulwe ngendlela enjalo yokukhuphisana ngokubaluleka kwezinto ezithile ezimele iingenelo zokhuphiswano zabathengi.
Oku kuthetha ukuba inkampani kufuneka inikezele ngeenzuzo ezibonakalayo kubathengi bayo. Abo banokukwazi ukuthenga iimveliso ezinobulunga ngcono baya kuzithenga kuwe nakwixabiso eliphezulu, kwaye abo bafuna intengo ephantsi akunakwenzeka ukuba bajolise kwiimpahla eziphezulu. Abathengi bahlala beqwalasela izinto ezinjalo, abaphathi, ngelanga, akusoloko.
Emva kokuba unqume okokuba inkampani yakho izakudala ixabiso kumthengi, emva kokulungiswa kwishishini lakho kunye nokomeleza inzuzo yakho yokukhuphisana, kufuneka uthathe ulawulo loxanduva lwezezimali kwishishini lakho. Ngaphantsi kwesi sihlandlo kuyaqondwa ukuba iimali kufuneka zilawulwe ngesandla esomeleleyo kwaye kuyinqweneleka ukuba sisandla senhloko. Kunoko, kuthetha ukuba yonke inkokeli iyazi iinjongo zeenkampani kwaye imise imisebenzi eya kushukumisela inkampani phambili. Ngokuqinisekileyo unako ukuqesha umxhasi wezemali, kodwa lungele ulungiselele ukuba uya kuqhutyelwa "isithunzi". Nangona oku kungeke kwenzeke, akusayi kuba lula kuwe ukulawula ishishini ngaphandle kokuba nembono epheleleyo yendawo yayo kwimarike.
Ukubeka iliso kuqinisekisa ukuphathwa kakuhle kweshishini nganoma naliphi ixesha, ulawulo lusekelwe ngokusisiseko kwiinkcukacha. Ngokomzekelo, nganye inkampani idinga ukulawulwa kwemali. Iqumrhu ngalinye linabhajethi yalo, ngoko unako ukulawula inkcitho yeshishini lakho. Kufuneka ufumane rhoqo ulwazi malunga nendlela imali echithwa ngayo ngamasebe ahlukeneyo, indlela abajika ngayo kwaye bayanda. Ulawulo lwezemali luyimfuneko ukuqinisekisa ukuba inkampani ichitha imali eninzi njengoko ifuna ngokwenene-ayikho enye, ingekho ngaphantsi - kwiinjongo zophuhliso loshishino.
Ibhizinisi liqukethe iinkqubo ezininzi, ngoko ke usenokuva ngeenkqubo zokulawula. Kule meko, injongo yokugcina umgangatho weemveliso, ukusebenzela ukuwamkela abantu abayimfuneko nokuthenga izinto eziyimfuneko ngexabiso elifanelekileyo. Ulawulo kunye nolwazi olunxulumene lunika umphathi ithuba lokulawula inkampani.
Ibhizinisi likhona "ukwenza imali". Imali ezuzwe kwishishini ingabalwa ngeendlela eziliqela. Kungakhathaliseki ukuba zibalwa njani, amabhizinisi kufuneka azuze kwimisebenzi yawo. Ukuba, kwixesha elithile lexesha, ishishini lifumana imali emininzi kwimisebenzi yalo kunokuyidla ukuyiqonda - yayiyinxalenye enenzuzo. Ukuba ngokuchaseneyo - ilahleko kwishishini. Awukwazi ukunyamezela ilahleko ixesha elide, ngenxa yoko uya kuba unqabile.
Injongo ephambili yolawulo kukufumana imali kwimisebenzi yenkampani. Kungakhathaliseki ukuba uyakwazi kangakanani ukwenza ishishini, akufanele uvumele ukugqithisa ngaphezu kweenzuzo zangempela. Kungakhathaliseki ukuba yintoni ummandla onokujamelana nayo kwishishini, injongo ephambili inenzuzo.
Khumbula ezi ngongoma ezihlanu ezisisiseko ngaphambi kokugqiba apho uqala khona ishishini. Khawucinge ngolu hlobo "oluninzi ezintlanu" ngokubonakalayo, kuba luphantsi kwayo yonke into inkokeli eyenzayo. Zonke iindawo zomsebenzi zidibene nomnqweno oqhelekileyo-ukuguqula ezi ngcamango zibe yinyani kwenkampani kunye nabathengi bayo.
Uqeqesho: Ukukhangela kwamakhasimende asebenzayo
Iingcebiso malunga nendlela abafazi abakhuthazwa ngayo
Yintoni engabandakanywa ngexesha lokuvavanya
Iingeniso kunye nokungalunganga kokuthengiswa kwenethiwekhi
Ixesha lokuvavanya emsebenzini omtsha
Indlela yokuyeka ukuhleka ngendaba ngothando lwakho
Indlela yokuvula ishishini lakho loshishino
Unyango lwe-Reynaud's syndrome kunye namayeza omntu
Indlela yokudweba iCapeid
Iziphumo zemibuzo evela kwi "Söstry Mamoutine"
Amaapula amnandi athile
I-cheesecake kunye namadiribi (ngaphandle kwamaqanda)
Yintoni indoda e tshatayo efuna kuyo kwindawo yokuthandana
Imidlalo yokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa kubantwana
I-Horoscope yonyaka wonke, intlanzi
I-Mini Cheesecake Mini
Ukuhleka kunye neenyembezi: umdlali wezakhono ezingenabunzima u-Irina Gorbacheva
Iindlebe zengulube kunye neembotyi kwindlela yesimo selizwe
Yintoni endiyifanele ndiyifake esibhedlele ukuze ndizalwe?
Imilenze iyahluma: izizathu, yintoni enokuyenza, indlela yokukhusela
Ungamkholisa njani umntu omthandayo?
Uthokozo lwe-Fruity - i-calert low calories
Iipropathi zokwelapha ze-currant ebomvu
IHoroscope, apho iimpawu zowomntwana weZodiac ziya kuzalelwa ngo-2017